Kulan looga hadlayay ka hortagga Covid 19 oo Muqdisho lagu qabtay | Home somali news leader
Home NEWS Kulan looga hadlayay ka hortagga Covid 19 oo Muqdisho lagu qabtay
Guddoomiyaha Gobalka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Cumar Max’uud Maxamed (Cumar Filish) ayaa Aqalka Dowladda Hoose ee Xamar kulan kula qaatay xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumada Somaliya.
Wasiirada ka qeyb galay kulankan waxaa ka mid ahaa Wasiirada Caafimaadka, Gargaarka, Warfaafinta iyo Wasiir ku-xigeenka diinta iyo Awqaafta
Kulanka ayaa waxaa looga hadlay dadaalada lagu dardargalinayo ka hortagga faafitaanka Xanuunka COVID-19 iyo sidii Xukuumada iyo maamulka gobolka iskaga kaashan lahaayeen wax ka qabashada cudurkan.
Waxaa sidoo kale ka qeyb galay kulanka agaasimaha Isbitaalka Martiini Dr. C/risaaq Yuusuf Jalaaludiin oo ka warbixiyey halka ay mareyso xaalada Isbitaalka oo ah kan kaliya ee magaalada Muqdisho lagu daweeyo dadka uu soo rito cudurka COVID-19.
Waxaa uu sheegay in inkastoo ay sare u sii kacayaan kiisaska cusub ee cudurka ay haddana ku guuleysteen iney hoos u dhigaan tirada dhimashada dadka uu soo ridanayo cudurkan, wuxuuna xusay in isbitaalku diyaar u yahay inuu si bilaash ah ugu adeego bulshada.
Kulan loogaga hadlayay kahortagga Covid oo Muqdisho lagu qabtay
Previous articleGuddoomiye ku xigeenkii Amniga Gobolka Hiiraan oo xilka laga qaaday
Next articleThe explosion series hits military barracks in Equatorial Guinea